Mety tsy hisy ankizy tsy te hitsambikina, hihazakazaka, hianika ary handamina disadisa ao an-trano. Noho izany, maro ny reny mieritreritra ny fomba hanaovana izany mba tsy hamerana ny asa ataon'ny moto ilay zaza? Ny làlana ivelan'ny toe-javatra dia ny fametrahana ny tranobe fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy ho an'ny tokantrano.
Inona moa izany - DSC?
Raha mamela ny toerana hivelomana, ny safidy tsara indrindra ho an'ny kilasy dia fitaovana fanatanjahan-tena ao an-trano. Izany dia ahafahanao mahafantatra ny zazakely miaraka amin'ireo fitaovana fanatanjahan-tena samihafa.
Amin'ny ankapobeny, ny zorony fanatanjahantena dia ahitana kiraro maromaro ho an'ny fampiharana isan-karazany. Ny ampahany manan-danja amin'ny sahan'asa toy izany dia ny rindrina Soedoà, ny lakroa, ny peratra, ary amin'ny tranga sasany dia misy tady.
Ahoana no hisafidianana sarotra?
Tsy dia sarotra ny fizotry ny fisafidianana toeram-pambolena an-trano ho an'ny ankizy. Voalohany indrindra, ilaina ny mandinika ny fitaovana izay nanaovana ny onjam-peo: metaly na hazo, ary koa manadino sy ny fomba famahana azy - ao amin'ny spacer na mivantana mankany amin'ny rindrina.
Ny fampiasana matetika amin'ny fametrahana ny trano dia trano fanatobiana hazo ho an'ny ankizy. Ny zava-misy dia, araka ny fomba fijery ara-ponenana, dia toa mahafinaritra kokoa noho ny metaly izany. Ankoatra izany, ary mora kokoa ny vidiny. Na izany aza, ny fahamendrehana sy ny faharetany dia kely kokoa noho ny metaly. Amin'ny ankapobeny, izy rehetra dia mifatotra fotsiny amin'ny rindrina. Ny lanjany farafahakeliny izay azony atrehina dia 60-75 kg.
Ny trano fanatanjahan-tena an-trano dia azo antoka kokoa noho ny hazo. Noho ny zava-misy fa ny metaly dia manana fahafahana hivezivezena, ny dingana rehetra amin'ny fametrahana toy izany dia tsy maintsy voatery ny fanangonana fingotra. Raha avelan'ny habaka, afaka mametraka trano lehibe iray ianao, izay ho afaka hiatrika ny reny sy ny reny, satria mora mahatohitra ny entana 100-120 kg. Amin'izay fotoana izay, ho faly ilay zaza fa ny rainy aman-dreniny koa dia tafiditra ao aminy. Ny asa toy izany dia hampiroborobo ny fiarahan'ny zazakely.
Raha, raha ny marina, kely ilay trano ary tsy misy toerana manokana, dia azonao atao ny mametraka ny rindrankajy fanta-daza malaza. Na izany aza, noho ny endriky ny fanoritsoritana, ny zaza dia tsy afaka manao izany, tsy hahatratra ny lakandrano izy.
Ilaina ny mandinika ny fahafenoana. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny trano fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy dia vita araka ny fanirian'ny mpanjifa. Noho izany, ny ray aman-dreny dia manana zo hisafidy: manangona angona na, ohatra, paompy.
Shells izay tsy maintsy anisan'ny sarotra
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny isan'ireo kibay izay tsy maintsy miditra ao amin'ny trano fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy dia miankina mivantana amin'ny fahafahan'ny toerana malalaka. Noho izany, ny mahazatra indrindra dia mora mora ny mametraka azy ireo ary tena mahavariana.
Ny tadin'ny tady dia tetikasa tena tsara, izay hanatsaran'ilay zaza ny fandrindrana ny hetsika. Ankoatr'izay, mandritra ny fampiofanana dia mitrandraka ny fitaovan'ny vestibular.
Ireo kilasy eo amin'ny tady dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fitaovan'ny musculaire amin'ny tendrony ambony sy ambany.
Ao amin'ny tranobe fanatanjahan-tena rehetra an'ny ankizy dia misy koa antsoina hoe gon - lakroa miaraka amin'ny fitambaran-trano roa. Ity akorany ity dia ampiasaina amin'ny fananganana sy fanamafisana ny hozatry ny tanana.
Fiarovana ny trano
Ny antony iray manan-danja amin'ny fampiasana ankizy ao anatin'ireo toeram-pitsaboana ireo dia ny fanarahana ny fitsipika momba ny fiarovana. Noho izany, rehefa mampihatra fampihorohoroana eo amin'ny haavon'ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mampihetsi-po foana ilay zaza, ary mitazona izany. Ankoatra izany, tsy dia ilaina loatra ny mametraka ny matsora eo amin'ny tany, izay hanalefaka ny fipoahana amin'ny fahalavoana.
Ny Programa Montessori
Fanamiana fianarana ho an'ny taona 2013
Zo sy andraikitry ny ray aman-dreny
Famoaham-baovao momba ny fiovan'ny toeram-ponenana ao amin'ny kindergarten
Inona no hiomanana amin'ilay zaza?
Ny fiambenana sy ny fiahiana ny ankizy
Afaka entina ve ny vehivavy bevohoka?
Ny zaza 2 taona dia tsy miresaka
Nifoha ny ankizy tamin'ny alina ary nitomany
Ny fitomboan'ny zaza amin'ny taona
Shampoo ho an'ny saka
Tsy mahazo mitsidika an'i Victoria amin'ny fandaharana miafina Victoria i Katy Perry
Syndrome amin'ny fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha
Ny andraikitry ny lehilahy ao amin'ny fianakaviana
Mamy mofomamy sy ronono mandoro
Fandefasana entana mankany syphilis
Sarin'ny fianakaviana amin'ny ankizy
Review of ilay boky "Manarara ny hoavy" - Eric Sigel
Fikarohana momba ny "Ford"